Home » Treadmills » Proform » Proform Performance 600i Treadmill amin'ny vidin'ny $ 799
2016 Treadmill Deal
Ny rindran-draharaha 600i Performance 799i dia amidy amin'ny $ XNUMX avy ProForm.com ho fotoana voafetra fotsiny!
Performance Features 600i:
- Manongilan-tsofina: 0 - 12% Fidio ny laharana
- Fametahana: ProShox Miondrika miaraka amin'ny 4 Shock Absorbers
- Fehikibo: 20 "x 60" Randran-tandroka
- Fampiharana fampihetseham-po 22 nasongadin'i iFit Technology
- Fanofanana CoolAire Fanatanjahantena
- 325 Lb. Fiarovana mavesatra
- Fiarovana amin'ny 2-taona
- 1-taona momba ny asa an-tsitrapo ~ Fanamarihana: Fanafody mandritra ny androm-piainana dia ny mombamomba ny mpividy voalohany
Ny profester izao dia manolotra FREE SHIPPING ao amin'ny Unit mandritra ny fotoana voafetra
Kitiho eto mba hividy ny Performance Performance 600i androany amin'ny $ 799 avy amin'ny Proform.com! Raha mitady vondrona samihafa ianao, jereo ny ProForm Treadmills Fizarana ao amin'ny tranonkalany
Ny vidin'ny saram-pihariana $ 799 ho an'ny profil Performance 600i dia ampiasaina amin'ny 1 / 5 / 16. Ny vidiny sy ny fepetra azo ampiasaina amin'ity fifanarahana ity dia mety hiova. Ny loka rehetra azonao amin'ny Proform.com amin'ny fotoana fividianana dia ampiharina amin'ny baikonao
Janoary 5, 2016 Admin Proform, Proform.com, Treadmills Tsy asian-teny